Basanta Basnet: कुरा खस्रा मिठा 1
नश्ल होइन, एजेन्डा
किरात एकेडेमीको पुरस्कार दुईले पाइसके। पोहोर 'उर्गेनको घोडा' का उपन्यासकार युग पाठकले, यसपालि …ब्रिटिश साम्राज्यका नेपाली मोहरा : गोर्खा भर्तीको नालिबेली' का लेखक झलक सुवेदीले। संयोग, दुवै परेछन् बाहुन। अनि पोहोरझैं यसपालि पनि मञ्चमा अध्यक्ष भूपाल राई र एमाओवादी नेता गोपाल किरातीबाहेक सप्पै बाहुनै बाहुन।
उपन्यासकार पाठकले ट्याक्क कुरो मिलाए, …नश्लले होइन, एजेन्डाले हामी एक ठाउँ उभिएका हौं।'
प्रमुख अतिथि प्रचण्ड र पुरस्कार थाप्ने सुवेदी दुवै परेछन् कास्कीका। जमानाका विद्यार्थी नेता सुवेदीले मिलाएर ठोके, 'जब प्रचण्ड आन्दोलनमा लाग्छन्, मलाई समर्थन गरुँ गरुँ लाग्छ। तिनै प्रचण्ड जब सत्तामा जान्छन्, मलाई ढुंगा हानुँ हानुँ लाग्छ।'
प्रचण्ड पनि के कम। आफ्नो पालोमा भन्दिए, …मलाई पनि कलाकार भेट्दा कलाकार हुन मन लाग्छ। खेलाडी भेट्दा खेलाडी हुन मन लाग्छ। लेखक भेट्दा लेखक पो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ। कहिलेकाहीँ त लाग्छ, कुन दिनमा यो बाटो लागिएछ।'
मने प्रचण्डका रहर जो छन्!
पंक्तिकारले कतै पढेको थियो – प्रेसले सबैखाले तानाशाहीको विरोध गर्छ किनकि त्यसपछि उसको तानाशाही सुरु हुन्छ।
कुनै कुनै समारोहमा जाँदा वक्तालाई घेरिरहेको फोटोग्राफर समूह हेर्दा सत्य हो कि जस्तो लाग्छ। यसरी झुम्मिन्छन्, दर्शकहरुले देख्नका लागि त्यहाँ केही बाँकी रहन्न।
त्यसमाथि किताब, सिडी विमोचन भइसकेपछि पुग्ने कुनै कुनै फोटोग्राफरले तस्बिर प्रयोजनका लागि फेरि प्रमुख अतिथि र लेखक, कलाकारलाई उभ्याउँछन्। अनि विमोचन गरेजस्तो गराउँछन्। फोटो खिचेर हिँड्छन्।
एकेडेमीको कार्यक्रममा पोहोर पनि यस्तै भयो। कवि विनोदविक्रम केसीको किताब विमोचनमा ढिलो पुगेका फोटोग्राफरले यसै गरे। पंक्तिकारले अन्यत्र पनि यस्तो देखेको छ।
यसपालि 'प्रतापी प्रचण्ड'लाई समेत फेरि उभ्याउने सामर्थ्य राखे फोटोग्राफरले। उनी र सुवेदी फेरि उभ्भिए। प्रचण्डले पुरस्कार दिएजस्तो गरे, सुवेदीले थापेजस्तो। ओहो, फोटोवालेहरूले पनि खिचेजस्तोमात्रै गरेको भए!
कडै हुँदारा'न् यी फोटोग्राफर।
प्रचण्डको उमेर बढेछ
लेखक खगेन्द्र संग्रौला प्रचण्डलाई 'साथी प्रचण्ड' भनी बोलाउँछन्। प्रचण्डचाहिँ संग्रौलालाई 'खगेन्द्रदाइ' भनी बोलाउँथे। यसपालि भने उनले 'खगेन्द्रजी' भनी बोलाए। संग्रौलाले के ठाने कुन्नि! पंक्तिकारले चाहिँ ठान्यो, 'प्रचण्डको उमेर बढेछ।'
Nagarik Push 14 Saturday 2069 Collage First Issue....
Posted by Basanta Basnet at 8:18 AM